လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စ ဂျာနယ်များ သတိထား ရေးသားဖော်ပြ | ဧရာဝတီ
မေစစ်ပိုင်| December 6, 2012 | Hits:1
| | လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းကို အာဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းဂျာနယ် အများစုတွင် သုံးသပ်ဝေဖန်မှုများထက် သတင်းသက်သက်ကိုသာ သတိထား၍ ရေးသားဖော်ပြမှု များပြားကြောင်း သိရသည်။
ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်အများစုတွင် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများကို ဖော်ပြ နေသော်လည်း အများစုမှာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြေညာချက်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၊ ပြောကြားချက်များနှင့် ဖြစ်စဉ်သတင်း တချို့ကိုသာ ဦးစားပေးဖော်ပြနေပြီး ဌာနဆိုင်ရာ မေးမြန်းချက်များနှင့် သုံးသပ်ချက်၊ ဝေဖန်ချက်၊ အာဘော်၊ ဆောင်းပါးများအပြင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကြေးနီစီမံကိန်း ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန္ဒပြမှုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖမ်းဆီးထိန်းမှုအကြောင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့ခြင်း မရှိသလောက် နည်းပါးသည်။
လူထုအုံကြွမှုကို အားပေးသကဲ့သို့ မဖြစ်စေရန်အတွက် လက်ပံတောင်းတောင် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးသပ်ဝေဖန်ခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ သတင်းသက်သက်ကိုသာ ဦးစားပေး ဖော်ပြနေကြကြောင်း၊ စာပေစိစစ်ရေး၏ ဆင်ဆာ မရှိတော့သော်လည်း ထုတ်ဝေသည့် ဂျာနယ်၏ မူဝါဒနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်နှင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များအပေါ် မူတည်၍သာ စာမျက်နှာထက်တွင် ဖော်ပြ ကြကြောင်း၊ အမျိုးသားရေး လှုံ့ဆော်မှု ဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် ဖြစ်စဉ်အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း၊ ထောက်ပြဝေဖန်ခြင်းများ မပြုလုပ်ကြကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဌာနဆိုင်ရာက သတင်းသမားများ၏ မေးမြန်းချက်ကို ဖြေကြားမှု အားနည်းကြောင်း ပြည်တွင်း ဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူ များနှင့် အယ်ဒီတာများက ပြောသည်။
“ဒီကိစ္စက လူထုနဲ့ သံဃာတော်တွေက စိတ်ထိခိုက်မှုများတဲ့ သတင်းဆိုတော့ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ တော်တော်လေးကို သတိထားပြီး ရေးရတဲ့ အနေအထားပါ။ စိတ်ပူတာက Facebook စာမျက်နှာတွေမှာ ပြင်းထန်တာတွေလည်း ရေးနေကြတော့ ဂျာနယ်တိုက်တွေက တော်တော်လေး သတိထားပြီး ကျင့်ဝတ်အရ လုပ်နေကြတယ်” ဟု7Day News ဂျာနယ် အမှုဆောင် အယ်ဒီတာ ကိုအားမာန်က ပြောသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်ထုတ်7Day News ဂျာနယ်တွင် “နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ရန် အားလုံးမှာတာဝန်ရှိသည်” ဟု ခေါင်းစဉ်ပေးထားသည့် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ပဋိပက္ခအပေါ် အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ သုံးသပ်ထားသည့် ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို ဖော်ပြထားသည်။
အစိုးရ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့သည့်7Day News ဂျာနယ်တွင် ပါရှိသော ဆောင်းပါးရေးသားရန် ကိုအားမာန်က အစိုးရသတင်း ထုတ်ပြန်ရေးနှင့် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနများသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဖြစ်ပွားမှု ကြာမြင့်နေပြီး ရှုပ်ထွေးသည့် ကြေးနီစီမံကိန်း ကိစ္စတွင် စာပေစိစစ်ရေး မရှိသော်လည်း အစိုးရအပေါ် သုံးသပ်မှုများအား သတိထား ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ရကြောင်း ရှင်းပြသည်။
ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် အတိုင်ပင်ခံ အယ်ဒီတာ ဦးဖေမြင့်က “လူထုကို အသိပေးဖို့ ဂျာနယ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖော်ပြပေမယ့် တချို့ကိစ္စကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့ မရေးဘူး၊ တခုခုကို တိုက်ခိုက် ရေးသားတာမျိုးတော့ မလုပ်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
ကြေးနီစီမံကိန်း အရေးကို ဂျာနယ်များက လွတ်လပ်စွာ ရေးသားနေသော်လည်း အကျိုးအကြောင်းနှင့် ထိန်းသိမ်း ရေးသားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများကလည်း အစိုးရ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာ ထုတ်ပြန်နေသည့် အတွက် အစိုးရ ပြန်ကြားရေး သက်သက်သာ ဖြစ်နေသည်ဟု သုံးသပ်မိကြောင်း သူက ဆိုသည်။
နိုင်ငံရေးသတင်းနှင့် ဒေသန္တရ သတင်းများကို အများဆုံး ဖော်ပြလေ့ရှိသည့် The Messenger ဂျာနယ် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုသူရအောင် ကလည်း ဂျာနယ်စာမျက်နှာများ ထက်၌ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အရေးများကို ဖော်ပြရာတွင် တိုင်းပြည် အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေနိုင်မည့် သတင်းများ ရှောင်၍ လူထုကို ဆူပူအုံကြွမှု မရှိစေရန် အဓိကထား ဖော်ပြနေကြောင်း ပြောသည်။
ယခင် စာပေစိစစ်ရေးရှိစဉ်က ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက် ခံရခြင်းကြောင့် ပြည်သူလူထု အနေဖြင့် သတင်း ဖြစ်ရပ်မှန်ကို မသိ ရသဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကို မချနိုင်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိတွင် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားပြောဆိုခွင့်များ ရှိလာသည့်အတွက် သတင်းများ မှန်ကန်မှုရှိရန်နှင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ တင်ပြနိုင်ရန် လိုအပ်လာကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်သည်။
Weekly Eleven ၏ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးက “သတင်းကို သတင်းလိုပဲဖော်ပြတယ်။ ဆင်ဆာရှိလည်း ဒီအတိုင်းပဲ၊ ဆင်ဆာမရှိလည်း ဒီအတိုင်းပဲ၊ ပြည်သူတွေ အတွက် လိုအပ်တယ် ထင်ရင် သိသင့်တာကို ဖော်ပြသွားဖို့လိုတယ်” ဟု ပြောသည်။
နေပြည်တော် တိုင်းမ်ဂျာနယ် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ဦးစောလင်းအောင် ကလည်း စိစစ်ရေး၏ မူဝါဒကို သိနေသောကြောင့် သတင်း ဖော်ပြရာတွင် ပြဿနာမရှိကြောင်း၊ လက်ပံတောင်းတောင် ကိစ္စကိုမူ ဖြစ်စဉ်များအပေါ် မူတည်၍ မည်သို့ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းမည် ဆိုသည့် အချက်ကိုသာ ဦးစားပေးဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
လက်တလောတွင် ဂျာနယ်အရောင်းဆိုင်များ၌ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ပြဿနာများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် သတင်းဂျာနယ်များကို လူထု စိတ်ဝင်စားမှု များပြားနေကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ကြေးနီ စီမံကိန်း ကိစ္စရပ်များ အပေါ် မည်သို့ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း ပါရှိသည့် သတင်းဂျာနယ်များကို ပိုမို မေးမြန်းဝယ်ယူလိုကြကြောင်း ဆူးလေ ဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ ဂျာနယ်ဆိုင်များမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိနေသော BBC သတင်းဌာန၏ မြန်မာပိုင်း အယ်ဒီတာ ကိုစိုးဝင်းသန်းက “ဒီမှာရှိတဲ့ လူငယ် သတင်းထောက်တွေက ဆင်ဆာ မရှိတော့ပေမယ့် အသားမကျသေးတော့ ထိန်းပြီး ရေးနေတာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ သိပ်မရဲဘူး။ နည်းနည်းလေး လမ်းပွင့် လာပေမယ့် ရေးချင်တာ ရေးနေတာ ရှိသလို၊ စိုးရိမ်တာတွေလည်း ရှိနေတယ်” ဟု ပြည်တွင်း ဂျာနယ်တချို့၏ သတင်းရေးသား ဖော်ပြနေမှုများအပေါ် သုံးသပ်သည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများအနေနှင့် လူထု သိသင့်သည့် အချက်အလက်များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ဝေဖန်ဖို့ တွန့်နေတာလား၊ ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် လားတော့ မသိဘူး၊ မီဒီယာဆိုရင် အစိုးရဖြစ်ဖြစ်၊ ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ဖြစ်၊ အမှန်ကို ရေးဖို့လိုတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲသည့် သတင်းများကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနများတွင် ယနေ့အထိ ဖြစ်စဉ်အတိုင်း ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ ဒုဝန်ကြီးများက လူနာများကို သွားရောက် အားပေးသည့် သတင်းနှင့် ဆရာတော်များထံမှ သြဝါဒ ခံယူသည့် သတင်းစသည့် သတင်းတချို့ကိုသာ ဖော်ပြထားကြောင်း တွေ့ရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းမှ လူထုနှင့် သံဃာတော်များကို တာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့က လက်နက်သုံး ဖြိုခွင်းလိုက်ရာမှ သပိတ်မှောက်သူများ မီးလောင်ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သည်။
ယခုအခါ အစိုးရက စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်း၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယနေ့နံနက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၌ ကျင်းပသည့် လက်ပံတောင်းတောင် ကိစ္စ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ယင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတင်းထောက်များအား ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့် နောက်ခံ အခင်းအကျင်းများကို သေချာစွာ စုံစမ်းပြီးမှ မှန်ကန်စွာ ရေးသားကြရန် ပြောကြားခဲ့သည်။
မြွေတောင် ဖားတောင်စီမံကိန်း ယာယီဆိုင်းငံ့ရန် ချင်းဒေသခံများ တောင်းဆိုစစ်ကိုင်းတွင် ရွှေတူး၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးကလောရွှေတွင်းပြိုမှု ၁၇ ဦးသေ၊ ၈ ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲလယ်လုပ်ခွင့်နှင့် ဖမ်းထားသူများ ပြန်လွှတ်ရေး လက်ပံတောင်း ဒေသခံများ တောင်းဆိုမြေမြှုပ်မိုင်းဒဏ် ခံရသူများ ခြေတုလက်တု တပ်ဆင်ရန် ခရီးသွားလာရေး ခက်ခဲနေ နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> swe htwe December 6, 2012 - 5:15 pm	To be no U-turn,we allare responsible. President,hluttaw chairpersons,Daw su and civil societies will solve this problem. Be healthy and wealthy myanmar !!!
Reply	Aung Khin December 7, 2012 - 12:21 am	It is right to control the writing theirselves.
And much demanding is useless and
dangerous from our 88 experience.
Reply	အောင်တင် December 7, 2012 - 2:38 am	ရခိုင်အရေးအခင်းတုန်းကလို ချာနယ်တွေက မီးလောင်ရာ ဓါတ်ဆီလောင်း၊ မီးမလောင်သေးရင် လောင်စာချ မလုပ်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 7, 2012 - 3:43 am	‘ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိနေသော BBC သတင်းဌာန၏ မြန်မာပိုင်း အယ်ဒီတာ ကိုစိုးဝင်းသန်းက’ – ဆိုတော့ နိုင်ငံခြား အခြေချပေါ့။ သဘောကတော့ မြန်မာပြည်ဖွားပေမယ့် အင်္ဂလိပ် ပါ့စ်ပို့ ကိုင်ထားတာလား။ သည်လိုဆိုရင် ရှင်က ပြောအားရှိတာပေါ့။ အင်္ဂလန်မှာက သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်။ ဘုရင်မနဲ့ မိသားစုကို အပုတ်ချ တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ရင် ကြိုက်တာ အမှန်ရေး၊ အလွန်ဆုံး ဖြစ် တရားစွဲ ခံရယုံပဲ။ ဒါတောင် ကိုယ့်မှာ ပိုက်ဆံရှိမှ တဘက်က တရားစွဲမှာ။ လမ်းဘေးနေတဲ့ အိမ်ခြေမဲ့ဆို ကိုယ့်ကို ကလောဆဲသွားလဲ ခံလိုက်ရုံပဲ။ ပိုက်ဆံမရှိသူ တရားသွားစွဲလို့ ကိုယ်ပဲ ရှေ့နေဘိုး၊ ရုံးကြေး ကုန်မယ်။ အခု မြန်မာပြည်မှာ ပြောင်းလဲ လာနေပါပြီဆိုပေမယ့် ဥပဒေတို့ အာဏာတို့ တရားစီရင်ချက်တို့ ဆိုတာ သူတို့ သေနပ်ပြောင်းဝက လာတာ။ ပြည်တွင်းကလူတွေ တချက်မှားတာနဲ့ ဦးသိန်းစိန် မညှာရင် ထောင်ထဲ ကားကနဲ ရောက်မှာ။ ၂၀၀၇ တုန်းက ၆၅ နှစ်တွေချတော့ သည်တခါ အနည်းဆုံး ၇၅ နှစ်နဲ့ အထက်ပဲ နေမှာ။ BBC အယ်ဒီတာကြီးကတော့ ရေးချင်တာ ရေး၊ ပြောချင်တာ ပြော၊ အဖမ်းခံရလဲ ကိုညီညီအောင်တို့ ယက်တောတို့လို အလွန်ဆုံး လပိုင်းပါပဲ။ သံရုံးက လိုက်ရွေးပြီး ဗမာပြည်ကို ဘိုင့်ဘိုင် လုပ်၊ အင်္ဂလန်ကို ဘင်သံလေးနဲ့ ပြန်လာရုံပေါ့ နော့။ ဒါလေးများ ပျင်းတောင် ပျင်းသေး ….. ။
Reply	သာကီသွေး December 7, 2012 - 1:43 pm	သတင်းဟာ
လိုအပ်တဲ့ DATA တွေ အထောက်အထား ကိုးကားချက်တွေ
ဘက်လိုက်မှုကင်းကင်းနဲ့ ပြောရဲ၊ ရေးရဲ တဲ့လူတွေသာ